Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka: Barack Obama oo Dhexdhexaadinaya Clinton & Sanders.
Maraykanka: Barack Obama oo Dhexdhexaadinaya Clinton & Sanders.
Posted by ONA Admin	/ June 10, 2016
Barack Obama ayaa kulan la yeelan doona murashaxa labaad ee xisbiga Dimuquraadiga Senator Bernie Sanders oo isagu weli sii wada ololaha uu ugu jiro inuu noqdo murashaxa rasmiga ah ee Xisbiga Dimuquraadiga uga qeyb geli doona doorashada Madaxweynaha ee bisha November.
Hillary Clinton oo ah murashaxada hada heysata cododka iyo ergada ugu badan ee xisbiga Dimuquraadiga ayaa dooneysa in Bernie Sanders uu isaga haro tartanka si markaasi ay diirada u saarto loolanka ay la geli doonto murashaxa dhinaca kale ee Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump.
Khilaaf weyn ayaa ka dhex taagan xisbiga Dimuquraadiga iyadoo in badan oo kamid ah taageerayaasha isabedal doonka ah ee Bernie Sanders ay si weyn uga soo horjeedaan in Hillary Clinton noqoto murashaxooda, maadaama ay u arkaan siyaasiyad aan wax badan ka bedali doonin awooda ay ganacsatada iyo Tujaarta waaweyn ku afuubteen hogaanka sare dowlada Maraykanka.
Obama oo isagu si hoose ulla safan Hillary Clinton ayaa doonaya inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu taageeri doono Mrs.Clinton, balse marka hore doonaya inuu ka dhaadhiciyo Bernie Sanders inuu sidoo kale taageero Hillary Clinton.
In badan oo kamid ah taageerayaasha Bernie Sanders ayaa si weyn uga carooday Hogaanka sare ee xisbiga Dimuquraadiga oo ay sheegeen inay si toos ah u la safteen Hillary Clinton isla markaana caqabado badan hordhigeen codbixintii laga qaadayey taageerayaasha xisbigaasi oo in badan oo kamid ah fursad u heli waayey inay codkooda siiyaan Bernie Sanders. Waxayna qaar badan ku dhawaaqeen inaysan Hillary codkooda siin doonin marka la gaaro doorashada guud ee dhici doonta bisha November.
Dadaalka cusub ee Obama ayaa sidoo kale ah mid lagu doonayo in xiisadan ka dhex taagan Xisbiga Dimuquraadiga la xaliyo kahor intaan la gaarin Shirweynaha ama Kongareeska guud ee xisbiga Dimuquraadiga oo dhici doona bisha soo socota ee Luulyo, halkaasi oo ay taageerayaasha Bernie Sanders ay sheegayaan inay ka dhigi doonaan kacdoon looga soo horjeedo Hillary Clinton.